भूमिगत जीवनपछि पहिलोपटक किन गोप्य राखियो प्रचण्ड बसेको ठाँउ ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
भूमिगत जीवनपछि पहिलोपटक किन गोप्य राखियो प्रचण्ड बसेको ठाँउ ?
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकान्तबास गएका छन् । आजदेखि केही दिनका लागि उनी एकान्तवासमा रहने भएका हुन् ।
प्रचण्ड पार्टीकोे राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज तयार पार्नका लागि एकान्तबासमा रहने जनाइएको छ । प्रचण्ड दस्तावेज तयार पार्नका लागि काठमाडौं उपत्यका नजिकै जान लागेका छन् । खुमलटार स्रोतका अनुसार भीडभाडले दस्तावेज तयार पार्नका लागि अधुरै रहने भन्दै प्रचण्ड काठमाडौं उपत्यका नजिकै जान लागेका हुन् ।
उनी कहाँ जाने भन्नेबारे खुलाइएको छैन । यसैबीच माओवादीले प्रदेश सम्मेलन अघि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत विधानमा सामान्य संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने विधानको आवश्यक परिमार्जन गर्न नेता देव गुरुङको संयोजकत्वमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल र मातृका प्रसाद यादव रहेको समिति गठन गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सम्मेलनमा समसामयिक प्रस्ताव तयार पार्न गिरिराजमणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत,गणेश साह रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रचण्ड दस्तावेज तयार पार्न, अध्ययन गर्न र आराम गर्न अरुबेला हात्तीवन रिसोर्ट, सिन्धुपाल्चोकको सुकुने जाने गरेका छन् ।